नेपालीहरुका लागि आयो यस्तो दुखद खबर, अब के गर्ला देउवा सरकार ? - jagritikhabar.com
नेपालीहरुका लागि आयो यस्तो दुखद खबर, अब के गर्ला देउवा सरकार ?
तर, बेलारुसमा सबै कुरा सामान्य दिनमा झैं चलिरहेका छन् । देशका सीमाहरु पहिलेजस्तै खुला छन् मानिसहरु काममा गइरहेका छन् र जरुरी सामान किन्नको लागि पसलतर्फ दौडिइरहेका छैनन् । सञ्चारकेन्द्र बाट